Nin Soomaali ah oo loo xiray dilkii xildhibaan David Amess - Idman news
London (Caasimada Online) – Nin Soomaali ah ayaa loo qabtay inuu ka dambeeyey dilkii mindida loo adeegsaday ee xildhibaan David Amess oo ka tirsanaa xisbiga Conservative-ka ee dalka UK.
“Wuxuu ahaa weerar deg deg ah. Nin ayaa si lama filaan ah mindi ula soo baxay kadibna billaabay inuu ku dhufto David Amess,” ayuu yiri qof goobjooge ahaa.
Booliska ka hor-tagga argagixisada iyo sirdoonka gudaha UK ee MI5 ayaa lagu warramay inay baarayaan, haddii ninka Soomaaliga, oo 25 jir ah, uu xiriir la leeyahay kooxaha xagjiriinta ee argagixisada.
Dadkii isugu tegay kaniisadda Belfairs Methodist oo uu kulanka ka dhacayey ayaa ayagoo argagaxsan daawaday David oo goobta ku dhintay, ayada oo kooxaha gurmadka deg degga ah ay isku dayayeen muddo laba saac inay badbaadiyaan.
Goobjoogeyaal ayaa sheegay in ninka Soomaaliga ah markii uu weerarka fuliyey oo uu mindida kala daalay Sir David uu muddo shan daqiiqo ah dul taagnaa, illaa ay ka yimaadeen booliska, oo kadib ka qaaday mindida islamarkaana xireen.
Sir David Amess wuxuu ka mid ahaa xildhibaanada sida weyn u taageeray ololihii Brexit ee UK ay kaga baxday Midowga Yurub. Waxa uu sidoo kale marar badan kasoo horjeestay sharciyo baarlaman oo lagu taageerayo xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isguursada.
Previous Barnaamijka Murti iyo Maaweelo (15-10-2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next Somaliland Innovation Zone will serve as a hub of ICT training for public officers and citizens who are interested in ICT learning